Ithegi: imeyile kwi-asidi | Martech Zone
Ithegi: imeyile kwi-asidi
Ixesha lokuthenga leKrisimesi lelinye lawona maxesha abalulekileyo enyakeni kubathengisi kunye nabathengisi, kwaye imikhankaso yakho yokuthengisa kufuneka ibonakalise ukubaluleka. Ukuba nephulo elisebenzayo liya kuqinisekisa ukuba uphawu lwakho lufumana ingqalelo elufaneleyo ngexesha elinenzuzo enkulu enyakeni. Kwihlabathi lanamhlanje indlela yompu ayisayi kuyinqumla xa uzama ukufikelela kubathengi bakho. Iibhranti kufuneka zilungelelanise iinzame zazo zokuthengisa ukudibana nomntu lowo
I-imeyile kwi-Acid: Ukuvavanywa kwe-imeyile, ukusombulula iingxaki kunye neZenzo eziPhambili
NgoLwesithathu, Matshi 23, 2016 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
Kukho isizathu sokuba iinkampani ezininzi zicwangcise ukuchitha ixesha kunye nemali kwintengiso ye-imeyile ngo-2016: ukuthengisa nge-imeyile kuyaqhubeka nokubamba eyona ROI iphezulu kuzo zonke iindlela zokuthengisa zedijithali. Wonke umthengisi unomboneleli weenkonzo ze-imeyile kunye noluhlu lokujonga uphuhliso lwe-imeyile. Kodwa kude kube ngokufuthi bajonge i-crux yephulo: ukuvavanya i-imeyile yabo kwizixhobo ezininzi kunye nabathengi ngaphambi kokumisela iphulo lokuhambisa. Nangona uninzi lwemikhankaso yovavanyo ngokuthumela i-imeyile
Ungakuthethelela njani ukuyilwa kwe-imeyile ephendulayo kwaye ungalufumana phi uncedo!
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 9, 2015 Lwesine, Okthobha 29, 2020 Douglas Karr
Kuyothusa kodwa abantu abaninzi basebenzisa i-smartphone yabo ukuba bafunde i-imeyile kunokuba benze umnxeba (faka ukukrokra malunga nokunxibelelana apha). Ukuthengwa kweemodeli ezindala zefowuni kuye kwehla nge-17% ngonyaka nangaphezulu kwe-180% yabantu abashishini basebenzisa i-smartphone yabo ukujonga kwangaphambili, ukucoca kunye nokufunda i-imeyile kunakwiminyaka embalwa edlulileyo. Ingxaki, nangona kunjalo, kukuba usetyenziso lwe-imeyile aluzange luqhubele phambili ngokukhawuleza njengoko izikhangeli zewebhu zinazo. Sisabambekile
Inkxaso yeVidiyo kwi-imeyile iyakhula- kwaye iyasebenza
Lwesine, Okthobha 24, 2013 Lwesine, Okthobha 24, 2013 Douglas Karr
Ngophando olunzulu olunzulu, iimonki ziphinde zeza nolunye ulwazi olunomdla kwiVidiyo ye-imeyile. Le infographic ibonelela ngezibalo ezixabisekileyo zokuba kutheni ukusebenzisa ividiyo kwi-imeyile kubalulekile, iindlela ezilungileyo zokubandakanya ividiyo kwi-imeyile kunye nezinye iintsomi ezinxulumene nokusebenzisa ividiyo kwi-imeyile. Le infographic iya kukuhamba ngokubaluleka kokusebenzisa ividiyo kwi-imeyile, iintlobo ezahlukeneyo ze-imeyile yevidiyo, iintsomi ezinxulumene nokusetyenziswa kwevidiyo kwi
Umbhalo wokuBhalisa -Ukuba usebenza nearhente yokuthengisa nge-imeyile, baya kuba sele benonxibelelwano neqabane elinikezela ngesicatshulwa ukubhalisa. Umbhalo wokuBhalisa sisixhobo esikhulu sentengiso se-imeyile. Yindlela yokuyeka ukukhulisa uluhlu lwakho lokuthengisa nge-imeyile. Abathengisi bakho be-imeyile bathatha ixesha lokuseta oku ngelixa uhlala phantsi kwaye ubukele iqhuba. Ngomgudu omncinci, uya kubona ukuba njani